Wararka - Hordhaca Dhalista
Dhalista kubbada jeexjeexan ee qoto dheer: markii hore loo yiqiin isku-xigta hal kubad oo radial ah, waa tan ugu badan ee loo isticmaalo wareejinta. Astaamaheeda waa iska caabinta khilaafaadka hooseeya iyo xawaaraha sare. Markay sita xamuulka kaliya xamuulka shucaaca, xagalka xiriirku waa eber. Markay giraanta kubbadda jeexjeexan qoto dheer leedahay nadiifin shucaac oo ballaadhan, waxay leedahay waxqabadka isku-xidhka xagalka xagasha waxayna qaadi kartaa culeys weyn oo axial ah.
Iswaafajinta qaadista kubbadda: oo leh dalool cylindrical iyo godka toobinta laba nooc oo qaabdhismeedka, wax qafis wuxuu leeyahay saxan bir ah, cusbi dardaro iyo wixii la mid ah. Astaamihiisu waa in tartanka giraanta banaanka uu yahay mid qaab goobeed leh oo leh awood is-waafajin. Waxay magdhow siin kartaa khaladaadka ay keeneen bartamaha iyo leexashada usheeda dhexe, laakiin u janjeedhka qaraabada gudaha iyo dibedda waa inaysan ka badnaan 3 darajo. Waxay badanaa qaadataa xamuulka shucaaca waxayna qaadi kartaa culeys yar oo axial ah isla waqtigaas. Barakicinta foosha ee wiishka (qolof) waxay ku xadidan tahay xadka nadiifinta, waxayna leedahay shaqada is-toosinta. Waxay si caadi ah ugu shaqeyn kartaa iyadoo ay ku xiran tahay xaalad u janjeera dhanka yar iyo gudaha. Waxay ku habboon tahay qaybaha meesha wadajirka ah ee daloolka kursiga si adag aan loo damaanad qaadi karin.
Dhalista meertada dhululubada: curyaaminta rogiddu waa wareegga wareegga wareegga wareegga wareegga. Qaab dhismeedka gudaha ee samaynta giraangiraha cylindrical wuxuu qaadanayaa nidaamka is barbar socda ee rollers, iyo baakada spacer ama spacer ayaa lagu rakibay inta udhaxeysa, taas oo ka hortagi karta u janjeerida rullaluistemadka ama khilaafka u dhexeeya rollers, iyo si wax ku ool ah looga hortago kororka wareegga wareegga . Rullaluistemadka Cylindrical iyo tartanka wadada waa xariiqyo toosan oo toos ah. Awoodda xamuul ballaaran, inta badan waxay qaadaan culeyska shucaaca. Muranka u dhexeeya curiyaha wareejinta iyo feeraha giraanta ayaa yar, taas oo ku habboon wareegga xawaaraha sare. Marka loo eego haddii giraantu ay flange leedahay, waxaa loo qaybin karaa hal-qaboojiyeyaal isdabajooga ah oo isku xigxiraya sida Nu, NJ, NUP, N, NF, iyo labalaab isku xidha silsilad isku xidhayaal ah sida NNU iyo NN. Dhalista waa qaab dhisme kala soocaya giraanta gudaha iyo giraanta dibedda.
Cirbadda dhalista cirbadda: rullaluistemadka la sita rullaluistemadka cylindrical, qaraabo ay dhexroor, rullaluistemadka waa khafiif ah oo dheer. Rullaluistemadka noocan ah waxaa lagu magacaabaa cirbadeynta cirbadda. In kasta oo ay leedahay qayb yar oo iskutallaab ah, haddana culeysku wali wuxuu leeyahay awood qaadista culeys sare. Qalabka cirbadeynta cirbadda waxaa lagu qalabeeyaa rollers khafiif ah iyo dheer (dhexroor rullaluistemadka D ≤ 5mm, L / D ≥ 2.5, l waa dhererka rullaluistemadka). Sidaa darteed, qaabdhismeedka shucaaca waa is haysta. Marka cabirka dhexroorka gudaha iyo awooda xamuulka ay lamid yihiin noocyada kale ee waarida, dhexroorka banaanka ayaa ugu yar, kaas oo si gaar ah ugu habboon qaabdhismeedka taageeraya cabirka rakibaadda radial ee xaddidan. Xaraashka oo aan lahayn giraan gudaha ah ama cirbadeynta irbadda iyo shirkii qafis ayaa lagu dooran karaa iyadoo la raacayo munaasabado codsiyo kala duwan. Waqtigaan, dusha sare ee joornaalka iyo dusha godka qolofta ee u dhigma sicirka ayaa si toos ah loogu isticmaalaa sida dusha sare ee duuban ee gudaha iyo dibedda. Si loo hubiyo isla xamuulka culeyska iyo waxqabadka hawlgalka sida sita giraan, adkaanta, saxnaanshaha mashiinka iyo tayada dusha sare ee wadada taraafikada ee wiishka ama godka qolka kore waa inay lamid tahay tan giraanta lagu sido. Nooca noocan ah wuxuu qaadi karaa oo keliya culeyska shucaaca.
Dhalista rullaluistemadka duuban: waxaa iska leh nooc gaar ah u qaadid. Fargallada hoose iyo dibedda ee xarig-goosadka waxay leeyihiin jidad tartan ah. Dhalista noocan ah waxaa loo qaybin karaa hal saf oo isku xigta, isku xigta laba jibbaaran iyo afar xariijimo oo duuban oo isku xigta. Isku xigxiga hal dhalashada duubista ayaa qaadi kara culeyska radial iyo culeyska isku dhafan ee jihada kaliya. Markay siddo culeyska shucaaca, waxay soo saari doontaa qayb ka mid ah axial, sidaas darteed waxay u baahan tahay dhal kale oo qaadi kara xoog ka soo horjeedka axial si ay u dheelitiraan. Marka la barbardhigo kubbadda xagasha ee xiriirka, awoodda qaadista waa weyn tahay, xawaaraha xaddidan wuu hooseeyaa, wuxuu qaadi karaa culeyska foorarsiga hal dhinac, wuxuuna xaddidi karaa barakicinta foosha ee qafis ama qolof hal dhinac ah.
Dhalista rullaluistemadka goobeed qaadku wuxuu leeyahay laba saf oo rollers ah, waddo guud oo wareega ah oo ku taal faraantiga dibedda iyo laba tartan orod oo gudaha ah xagal leh dhidibka dhalista. Barta dhexe ee wareega ee tartanka giraanta banaanka waxay ku taal dhidibka dhalista. Sidaa darteed, qaadistu waa mid iskeed isu dhejineysa oo aan u nugulayn qaladka iswaafajinta ee u dhexeeya usheeda dhexe iyo salka salka, taas oo ay sababi karaan arrimo ay ka mid yihiin leexashada usheeda dhexe. Qaadista gawaarida wareega ayaa si wanaagsan loo qaabeeyey, taas oo qaadi karta oo keliya culeyska shucaaca sare, laakiin sidoo kale waxay qaadi kartaa culeys culus oo ficil ah oo u jiheysan laba jiho.
Isku-riixista kubbadda:waxaa loogu talagalay in lagu qaado culeyska xawaaraha sare, wuxuuna ka kooban yahay giraan dhaqe leh jeex jeex jeex ah oo kubbadda lagu rogo. Sababtoo ah siddooyinku waxay u eg yihiin barkimmo, saa'idka kubbadda riixdu waxay u qaybsan tahay laba nooc: nooca barkinta sagxadda hoose iyo is-waafajinta nooca barkin-goobeedka. Intaa waxaa sii dheer, qaadashadu waxay qaadi kartaa culeyska foorarsiga laakiin ma ahan rar shucaac ah. Waxay ku habboon tahay oo keliya qaybaha xawaaraha hooseeya iyo culeyska foorarsiga.
Ku riix is-toosinta iskeelka sita waa qiyaastii la mid ah sida dhalista is-toosin ah. Dusha sare ee giraanta giraanta qaadeysa waa dusha meertada ah oo udub dhexaad u ah barta waafaqsan marinka dhexe ee dhalista. Duubista nuucaan ah ee noocan ah waa mid goobaaban. Sidaa darteed, waxay leedahay shaqo udub dhexaad otomaatig ah oo aan u nuglayn wadajirka iyo leexashada usheeda dhexe. Qaadista noocan ah waxaa badanaa loo isticmaalaa mashiinka qodista saliida, birta iyo mashiinada birta, matoor koronto dhaliya, matoor toosan, usheeda dhexe ee maraakiibta badda, wiishka munaaradada, qalabka wax lagu qoro, iwm.
Riix sita rullaluistemadka duuban: riixista rullaluistemadka duuban ayaa sameyn kara qaabeynta qaabdhismeedka foosha ee foosha Nooca noocan ah wuxuu qaadi karaa culeyska foosha ee culus, waa mid aan xasaasi u aheyn saameynta culeyska, wuxuuna leeyahay adkaansho wanaagsan. Sababtoo ah curiyaha duudduuban ee riixista rullaluistemadka riixitaanka ah waa duub duuban, qaab dhismeedka, wareejinta hiddo-wadaha iyo hiddo-wadaha qoob-ka-dhaqe ee mashiinka lagu dhaqo ayaa isku soo uruurinaya